Microsoft waxay diyaarineysaa bilaabida Thinga.Me codsi ah qabashada iyo abaabulka walxaha dhabta ah | Wararka IPhone
Microsoft waxay diyaarisaa bilaabida Thinga.Me codsi ah qabashada iyo abaabulka walxaha dhabta ah
Xaqiiqdi intiina badan oo idinka mid ah waxay leeyihiin aruurinta majaajillo, tirooyin, mobiillo, CD-yada, DVD-yada, kaararka boostada, gawaarida ... ururinta oo aad had iyo jeer ku haysato meel aamin ah ka fog gacmaha cidkasta oo qatar u noqon karta aruurintayada qiimaha badan ee aan sanado badan qaadanay inaan dhameystirno.
Shaybaarka tijaabada ee Microsoft wuxuu si joogto ah ugu shaqeeyaa codsiyada xiisaha leh ee aan had iyo jeer arag iftiinka. Markii hore, Microsoft waxay soo bandhigtay codsi u oggolaanaya dadka isticmaala inay dib u hagaajiyaan maqaarka sawir-gacmeedka ay isticmaaleyaashu ku qaadan karaan barnaamijka. Markan arjiga qarka u saaran inuu ka baxo shaybaarka Microsoft waxaa lagu magacaabaa Thinga.Me, waa codsi waxay noo ogolaaneysaa inaan qabsano walxaha oo aan abaabulno.
Codsiga wuxuu noo ogolaanayaa inaan sawirro ka qaadno dhammaan walxaha ku jira ururintayada illaa pka dib ku abaabulo arjiga gudahiisa. Codsiga wuxuu adeegsanayaa nambarka "GrabCut" oo ay soo saartay shirkadda Microsoft Research si uu si otomaatig ah u aqoonsado una kala saaro dhammaan walxaha ku jira sawirrada aan qaadno, isagoo u daayay kaliya muraayadaha si loo soo ururiyo.
Nolosheena waxaa ka buuxa waxyaabo jireed oo na xiiseynaya… Koox ahaan, waxaan la jahwareersanahay in aanu jirin codsi hufan oo noo oggolaanaya inaan dijital ka dhigno waxyaalahan jir ahaaneed si aan hadhow u abaabulno oo ula wadaagno saaxiibbadeen ama kuwa aan naqaanno.
Thinga.Me waxaa loogu talagalay in lagu buuxiyo booskaan banaan. Mantra-keena barnaamijka ayaa ah "Wax ururi, sawirro ha qaadin." GrabCut wuxuu adeegsadaa gabal koodh ah oo ay soo saartay shirkadda Microsoft Research muddo toban sano ka hor ah, kaas oo noo oggolaanaya inaan ka takhalusno inta hartay ee qabashada, iyadoo laga tegayo oo keliya shayga laga hadlayo. Ficilkan fudud ee ah ka saarida asalka shayga wuxuu na siinayaa dareen ah inaysan ahayn sawir la soo qaado, laakiin ay tahay wax jireed. Bartaan bilowgeeda waxaan ku darnay taariikh hore oo aan ku dhajin karno dhamaan uruurintayada.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso codsigan Microsoft, waad ku joogsan kartaa xiriirka soo socda isla markaana isdiiwaangeli haddii aysan wali daahin wali.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Microsoft waxay diyaarisaa bilaabida Thinga.Me codsi ah qabashada iyo abaabulka walxaha dhabta ah
Apple wuxuu sii daayaa beta shanaad ee iOS 9.3.3